Heavy Duty Super Closures Clamps Manufacturers and Suppliers - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Clamps Clamping > Heavy Duty Super Closure Clamps
Heavy Duty Super Closure Clamps
Ny tady dia natao ho an'ny metaly boribory boribory izay mety amin'ny fihazonana ny fantsom-piraikitra malefaka amin'ny sifotra boribory maromaro ary koa ny tsipika kely amin'ny diamondra kely kokoa. Afaka manao ireo clips ireo isika amin'ny alàlan'ny fanorenana vita amin'ny ravin-tsoavaly vita amin'ny vy / galvanisialy / elektrika, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny sasantsasany amin'ireo endriny dia ahitana ny habeny, ny safidy maro samihafa, ny fanoheran-java-manahirana lehibe, ny safidinao ary ny hafa.
Product Introduction of Heavy Duty Super Closures
Tena mafy orina ny fampiasana tsipika ho an'ny fanerena avo lenta sy ny hery mitongilana. Ny clamps dia omena amin'ny teboka boribory telo sy ny rindrina nasondrotra mba hampitombo ny fiarovana azy ireo, izay matetika ampiasaina amin'ny fitrandrahana, fandoroana, fanindronana sns. Hametraka tombo-kase Tailandey ho an'ny T-Bolt manome tsindry fanosotra fanamafisana ho an'ny taratasy mendrika sy azo antoka. Natao manokana ho an'ny fampiasana amin'ny fitarafana avo lenta sy ny fampiasana diamondra lehibe amin'ny kamiao mavesatra, fitaovana an-jatony sy fitaovana indostrialy. Ny clamps rehetra dia manana satroka misy ravina tapaka, trondron-dronono ary 12mm hex bolt ho an'ny fametrahana haingana. Izy ireo dia misy amin'ny karbaona rehetra, ampahany ririnina sy feno fanorenana rongony.
Taratasy momba ny vokatra mahery vaika
17-252mm (na mifanaraka amin'ny fepetra takiana aminao)
0.6mm 0.8mm 1mm 1.2mm 1.5mm 1.7mm
Vita vy vita amin'ny vy, stainless steel 201, stainless steel 301, 304 stainless steel. Stainless steel 316, steel carbon
30% T / T Talohan'ny famokarana ary nandao 70% talohan'ny sambo
Ao anatin'ny 45 andro
Kitapo plastika, carton na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ny karazana hosodoko isan-karazany dia mampitombo ny fitaovana fampifandraisana
Ireo endri-tsarimihetsika sy ny fampiharana ny adidiny mafy ho an'ny tavy mahery
1) Adi-mahery mahery vaika mafy mafy mitambatambatambatambana amin'ny ambaratonga mahery
2) Tetezana ny tadin-tsofina amin'ny clamp ho an'ny fiarovana tsara indrindra
3) Ny vatom-pasika vy mameno ny tanjaky ny tarika
4) Mamela ny fametrahana mora foana ny sifotra vaventy
5) Mitombo ny fanorenana sy ny fananganana rindrina hampitombo ny fiarovana sy ny fahamendrehana
Ho an'ny fampiharana mavesatra izay mila fepetra lehibe henjana.
Toe-katerena mafy ho an'ny karazana fiarovana sy fikolokoloana izay ilaina amin'ny kalitaon'ny rivotra manerana ny rivotra sy ny tsindry mafy.
Automotive, agriculture, construction and other sector.
Taridalana momba ny vokatra mahery vaika mahery vaika
1: Fanaraha-maso mialoha ny fametrahana;
2: Asio plastika ao anaty kitapo plastika, toy ny 10pcs / kitapo na 25pcs / kitapo na mihoatra;
3: Manaova kitapo plastika eo amin'ny carton, toy ny 50bag / ctn na 100bag / ctn na mihoatra;
4: vita amin'ny fonosana;
5: Fanaraha-maso alohan'ny handefasana azy any amin'ny trano fonenana.
Hot Tags: Heavy Duty Super Closet Clamps, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, On Stock, Bulk, Price, Price list, Quotation, High Quality
Dipoavatra mahery foToeram-piarovana mahery vaikaFivestar mafy baoritra
Clamps amin'ny lelavola plastika plastika